Khabiirka Kala Duwan: Ka-qaadashada Booqashooyinka Gudbinta Bogus Google Analytics
Ma aragtay booqashooyin badan oo tixraac ah oo ku saabsan wargeysyada Google Analytics oo eegaya bogus? Haddii taasi dhacdo, waxaa laga yaabaa inaad haysatid dhibaatada spam ee dagaanka - nooca spam ee saameeya tiro badan oo website ah iyo kuwa isticmaala internetka. Nasiib daro, Google Analytics ma xaliyaan dhibaatadan, weligii ma ogaan kartid sida loo mamnuucayo spamka. Lisa Mitchell, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Maamulaha Guusha Macaamiilka, ayaa sheegaya in habka kaliya ee looga takhalusi karo ay tahay inay iyaga gacanta u galiyaan filtarrada. Haa, waad ka saari kartaa iyaga oo ka saaran Google Analytics, taas oo ah xalka keliya ee aad haysato.
Waxaa laga yaabaa in aad marxalad aad u fariisatay sharaxaad ka bixineysa sida loo isticmaalo faylasha .htaccess faylasha ee xayiraadda spam gudbinta - network cable installation bay area. Khabiirada Rocketspark waxay macaamiishooda siinayaan macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan sida loo xakameynayo spam gudbinta iyo hubinta badbaadadaada internetka. Maxaa dhacaya haddii shaashadahaaga farsameedyada ay helaan spam galka? Sida spam emailka, spam u gudbinta waa la soo rogi karaa ama la xiri karaa. Webmaster waa inuu ka hortagaa boodbood mashiinka raadinta isku dhejinta laga bilaabo diiwaangelinta boggaga iyaga oo u wareejinaya meelaha aan dadweynaha ahayn sida goobaha ilaalinta ee password. Waa inuu isticmaalaa faylasha ka reebista robotka ama ku darso qiimayaasha nofollow ee xiriirka.
Waxaa la ogaaday in spam gudbinta gudbinta woxoogaa warbixino badan oo Google Analytics ah bil kasta. Qaar ka mid ah spamka ayaa ku dhuftey serverka websaydhka iyo blogs-kaaga, abuurista aragtiyo been abuur ah iyo riixista warbixinnada falanqaynta..In ka badan seddex sano, isbeddellada cusub ee spam gudbinta ayaa lagu soo bandhigay internetka. Spammers waxay isticmaalaan farsamooyin kala duwan si ay u waxyeeleeyaan darajadaada bogga ee natiijooyinka raadinta raadinta. Spammers ma booqdaan bogagga internetka. Waxay kaliya abuurayaan fikrado been abuur ah oo khiyaameeyaan xisaabta Google Analytics. Haddii aad rabto inaad joojiso spam qaylo-dhaan, waa inaad abuurtaa shaandhooyin Google Analytics ah oo iyaga xannibaya. Waxaad raaci kartaa talaabooyinkan fudud ee ku saabsan arrintan.
Tag qaybta maamulka ee xisaabta Google Analytics. Halkan waa inaad doorataa dhammaan qaybaha Filters ee hoosta ka ah xisaabta. Tallaabada xigta waa inaad gujisaa Farsamooyinka Cusub oo aad siisid shaashadda magac sax ah. Waa inaad sidoo kale dhigtaa Xogta Isgaadhsiinta ee qaybta ka reeban
Habka Falanqaynta (Filter Filter) waa meesha aad ka koobi kartid liiska dhamaanba domiyadaada iyo subdomains ee aad rabto inaad ka xannibto gaadiidka gudbinta. Indhaha ku hay sida ay u kala soocaan calaamadaha tuubbooyinka, iyo in xariiqda tooska ah ee ku yaal kumbuyuutarka. Waxaa suurtagal ah in lagu daro in ka badan hal domain, laakiin wadarta guud ee jilayaasha waa 255, markaa waxaad ku celin kartaa nidaamka saddex-geesoodka ah si aad u xayeysiiso dhammaan bogaggaaga.
Marka xigta, waa inaad buuxisaa shaandhada dhammaan bogagga shabakadda. Tani waxay tahay, waa inaad gujisaa Riix badhanka oo aad ku daboosho isbeddelka ka hor inta uusan xirmin daaqada.
Waa inaadan iloobin inaad gujiso badhanka Save. Had iyo jeer xasuuso in filtarradu ay ka saari karaan bogagga spamka laga bilaabo waqtigii lagu daray. Sidaa darteed, waa inaad sugto dhowr saacadood ama maalmo ka hor inta natiijooyinka laga ogaado warbixinta Google Analytics.